Rayson | U-Arpico entwasahlobo umatilasi
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. U-Arpico entwasahlobo umatilasi siyathembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende anemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi umatilasi we-arpico entwasahlobo kanye nezinsizakalo eziphelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, siyakujabulela ukukutshela. Kunokuthile okuphakamisayo ngokugqoka lo mkhiqizo wezemfashini. Kwakha umthelela omuhle emzimbeni, emoyeni nasengqondweni yalabo abagqokile.